यसकारण लिए बालेनले काठमाडौंमा अग्रता, अब कहाँ आउन सक्छ उनलाई बाधा ? – Sajha Post
यसकारण लिए बालेनले काठमाडौंमा अग्रता, अब कहाँ आउन सक्छ उनलाई बाधा ?
साझापोस्ट	३१ वैशाख २०७९ १२:२७
काठमाडौं । बालेन शाहको सुरुवाती अग्रताले काठमाडौंमा मुख्य दललाई ठुलो चुनौति खडा गरेको छ । नेवार समूदायको बसोबास रहेको कोर काठमाडौं भन्दा बाहिर बालेनप्रति ठुलो आकर्षण देखिएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरुप उनले सुरुवाती अग्रता लिएका हुन् । काठमाडौं महानगरका बाहिरी २० वटा वडामै बालेनको पक्षमा माहोल छ । अहिले गणना भैरहेको वडा नम्वर १ र ३२ मा कोर काठमाडौं भन्दा बाहिरका वडा हुन् ।
कोर काठमाडौंमा १७ देखि २५ नम्वर वडा रहेका छन् । ति वडामा पनि गतिलो मत ल्याउन सके बालेन मेयर बन्नेछन् । अहिले गणना भैरहेको क्षेत्र कोटेश्वर आसपास र कमलादी आसपासको क्षेत्र हो । जहाँ नेवार भन्दा पनि अन्य समुदायको बाक्लो बसोबास छ । तर कोर काठमाडौंमा बालेनलाई केही कम मत आउनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
यदि उनले बाहिरबाट ठुलो मतान्तरको लिड लिए भने मेयरमा जित्न सहज हुनेछ । उनको बसोबास भने कोर काठमाडौंमै छ । त्यसैले त्यहाँबाट पनि उनलाई राम्रै मत आउनसक्ने संभावना छ ।
बानेश्वर, मध्यवानेश्वर, बौद्ध, भिमसेनगोला लगायतका वडा नम्वर १०, २९, ३०, ३१ बाट बालेनले ठुलो अग्रता लिने अनुमान छ । यी वडामा उनलाई कांग्रेसले टक्कर दिनेछ । एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितलाई कोर काठमाडौंबाट बढि मत आउने अनुमान छ ।